Colaadda Tigray: Awowgey ayaa lagu amray inuu i kufsado | Berberanews.com
Home WARARKA Colaadda Tigray: Awowgey ayaa lagu amray inuu i kufsado
Colaadda Tigray: Awowgey ayaa lagu amray inuu i kufsado
Gabadh iskuuleey ah oo reer Itoobiya ah ayaa BBC-da u sheegtay sida ay ku weyday gacanteeda midigta ah. Waxay sheegtay inay markaasi ay iska difaaceysay askari isku dayay inuu kufsado.
Askariga ayaa sidoo kale isku dayay inuu awowgeed ku khasbo inuu u galmooda iyada.
Gabadhan oo 18 sanno jir ah oo aan magaceeda la shaacineyn ayaa ku jirtay cisbitaal ku yaalla waqooyiga gobolka Tigrey muddo laba bilood ah si ay uga soo kabato dhaawacii soo gaadhay.
Sababtuna waxay tahay ciidammada ammaanka ayaa billaabay howlgalo ay ku ugaadhsanayaan xubnaha kooxda TPLF ee diiday inay is dhiibaan, taas oo dhalisay eedeymo ku saabsan xadgudubyo ba’an oo xuquuqda aadanaha ah oo lagula kacay dadka deegaanka Tigray. Masuuliyiintu way beeniyeen eedaha loo soo jeediyay.
Gabadha ardayda ah iyo awoowgeed ayaa ku hadhay gurigooda oo ku yaalla magaalada Abiy Addi, oo qiyaastii 96km galbeed ka xigta Mekelle.
Kaddib markii uu baadhay guriga oo uu waayay cidna, wuxuu ku amray inay sariir ku jiifsadaan wuxuuna bilaabay inu xabbado argagax gelin ah rido.
“Kadib wuxuu ammar ku siiyay awoowgay inuu ila galmoodo. Awoowgay aad ayuu u xanaaqay … waxayna bilaabeen inay dagaalamaan,” ayay tidhi.
Waxay ay sidoo kale sheegtay in askariga uu awoowgeed banaanka u saaray oo ui halkaas ku toogtay ka dibna uu iyada ku soo noqday isaga oo leh waan dilay.
“Wuxuu yidhi:” Cidna hadda kuma badbaadin karto. Dharka iska siib. ” Waxaan ka baryay inaanu sameynin laakiin marar badan ayuu feedh igu dhuftay. “
“Dhowr daqiiqo ayaan la dagaalamaayay ” in kasta oo ay dareentay xanuun ka soo gaadhy nabarradii, muddo kaddib askarigii ayaa intuu ku xanaaqay ayuu qorigii ku qabtay.
Dhacdada gabadhan ayaa dib u soo xoojisay walaacyada la xidhiidha kiisaska kufsiga ee gobolka Tigray.
“Haweenka qaarkood ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa in ciidamada milateriga ay ku qasbeen inay badeecooyinka aasaasiga ay ku badeshaan, halka xarumaha caafimaadkuna ay muujiyeen inay kordheen baahida ka hortagga uurka degdega ah iyo baadhitaanka cudurrada galmada lagu kala qaado, taas oo inta badan tilmaam u ah kiisaska kufsiga oo kor u kacay. “
Dhakhtar iyo xubin ka tirsan urur u dooda arrimaha haweenka ayaa BBC-da u sheegay in bishii Janiary ay ka diiwaangeliyeen ugu yaraan 200 gabdhood oo ka yar 18 sano cisbitaalo kala duwan iyo xarumo caafimaad oo ku yaalla Mekelle kuwaas oo sheegay in la kufsaday.
Intooda badan waxay sheegeen in dambiilayaasha ay xidhnaayeen labiska ciidamada Itoobiya waxaana looga digay inay raadsadaan gargaar caafimaad.
“Waxaa ku yaalla nabarro, mid ka mid ah gabdhahaan waxaa la haystay muddo toddobaad ah. Mana jirto boolis, sidaa darteedna caddaalad ma leh,” ayuu yidhi dhakhtarku.
Atakilty Hailesilasse, oo ah duqa kumeelgaadhka ah ee loo magacaabay Mekelle, ayaa sheegay in qiyaasaha ay soo gudbiyeen kooxaha xuquuqda dumarka u dooda ay yihiin kuwo si weyn loo buunbuuniyey.
Dawladdu waxay dhawaan u dirtay guddi-baadhitaanTigray si ay u sii baaraan eedaymahan, oo ay ku jiraan dad ka socda wasaaradaha haweenka iyo caafimaadka iyo xafiiska xeer ilaaliyaha guud, in kasta oo aan weli la haynin warkoodii oo dhammaystiran.
Awowgey ayaa lagu amray inuu i kufsado
Gabadh lagu tacadiyay
Previous articleBoqor Buurmadow oo taageeray Musharrax Maxamed Somali
Next articleMaayarka Berbera oo xadhigga ka jaray xarumo caafimaad